Home Wararka Cudurka Covid19 oo Soomaaliya kusii fidayo iyo dhimasho badan oo jirta
Cudurka Covid19 oo Soomaaliya kusii fidayo iyo dhimasho badan oo jirta
Waxaaa dalka Soomaaliya si ba’an ugu sii fidayo Cudurka Covid19 iyada oo ay jiraan dhimasho badan oo la xiriirta cudurkaas. Waxaa sidoo kale aan jirin dabal buuxa oo lagu sameeyo cudurka iyo dadka u dhinta. Dowlada Federaalka ayaa soo saarto liis lagu sheegay in ay yihiin dadka isbitaalada yimaada ee laga helay cudurka laakiin cid og ma jirto dadka cururka qabo ee aan imaanin isbitaalada.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay Kiisas Cusub oo ku aaddan Caabuqa Covid19, waxaana gudaha dalka ugu geeriyooday caabuqa dad hor leh. Warbixinta Maalinlaha ah ee wasaaradda caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in dad hor leh laga helay cudurka, iyadoo ay jiraan kiisas dhimasho ah iyo sidoo kale dad cusub oo Cusbitaalada la dhigay, kuwaasi oo Caabuqa laga helay.
Wasaaraddu waxaa ay sheegtay in 48dii saac ee lasoo dhaafay guuda haan dalka laga baaray 2,425 ruux, waxaana xanuunka laga helay 124 ruux. Kiisaska la xariira Caabuqa ayaa waxaa laga kala helay degaanada Dowlad Goboleedyada iyo Gobolkani Banaadir.
Puntland: 54, Banadir: 50, Somaliland: 14, Galmudug: 5, Koonfur Galbeed: 1
Lab: 64, Dhedig: 60: Bogsashada: 71, Dhimasho: 11